नेपालमै बन्न थाले यस्तो भिडियो ! यी दुई नायिकाको चर्तिकला हेर्नुहोस् भिडियो – Saurahaonline.com
नेपालमै बन्न थाले यस्तो भिडियो ! यी दुई नायिकाको चर्तिकला हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौँ, १मंसिर |एक्काइसौँ औँ सताब्दीमा दौडी रहँदा समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिले नौलो लाग्ने कुराहरु आज भोली सामान्य हुँदै गएका छन् । त्यसको एक उदाहरण हो मानिसले आफ्नो लैङ्गिक अवस्थाको बारेमा खुलेर बोल्नु ।
पछिल्लो समय समलिङ्गी ब्यक्तीहरु खुल्न थालेका छन् । पहिले आफ्नो पहिचान खुलाउन डराउनेहरु अहिले समाजमा देखिएको सोचको परिवर्तनसंगै परिवर्तित भएका छन् । नेपालमा पनि त्यो परिवर्तन देखिएको छ । परिवर्तित समाजमा आफ्नो लैङ्गिक अवस्थालाई नलुकाउ भन्ने मुख्य हेतुले प्रविन श्रेष्ठको निर्देशनमा लेजबियनको कथा समेटिएको एक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
‘मनु’ एल्बममा समावेश दर्पण यात्रीको शब्द तथा जीतेन तामाङ लामाको संगीतमा अन्जु पन्तको स्वर रहेको ‘मैले भुल्नु’ बोलको उक्त गीतको भिडियोमा नायिका द्वय रीमा विश्वकर्मा र बेनिशा हमाललाई लेजबियन जोडीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोमा लेजबियन बनेका यी दुई नायिकाको इन्टिमेट सिन समेत समावेश गरिएको छ । भिडियोमा उत्तम हुमागाईको छयांकन, कसम नेपाल र मन्जिल श्रेष्ठको सह-निर्देशन तथा निर्देशक प्रविन श्रेष्ठकै सम्पादन रहेको छ । भिडियो मोक्क्ष प्रोडक्सनको प्रस्तुतीमा हेलो नेपाल इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको हो ।
रत्ननगर ६ मा कांग्रेसले गर्यो संसद विधटन विरुद्ध विरोध २०७७, ८ माघ बिहीबार